Garage punk - ဝီကီပီးဒီးယား
Garage punk သည် garage rock နှင့် punk rockတို့ လွှမ်းမိုးထားသော တီးဝိုင်းများ၏ ဂီတဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ တီးဝိုင်းအများစုကို 60s garage အဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ထိုခေတ်အခါက တိကျသော အသံအဖြစ်ပြန်လည်ကူးယူးဖော်ပြရန်မလိုပေ။ garage punk ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ dirty, choppy guitar အသံများဖြင့် တီးခတ်ထားပြီး စာသားများမှာ ပုန်ကန်လိုခြင်းများ ပါဝင်သည်။ တီးခတ်ထားသည့်တီးဝိုင်းများမှာ independent record labels များမှဖြစ်ပြီး (သို့) လက်မှတ်မထိုးထားသည့် တီးဝိုင်းများဖြစ်သည်။ garage punk တီးဝိုင်းများသည် သူတို့ကို hardcore punk မှဝေးကွာပြီး များသောအားဖြင့် တိကျသော ယဉ်ကျေးမှုသို့ မစွဲမြဲပေ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများမှာ punk ၏အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့် မဆက်စပ်ပေ။ ဤစကားရပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် 60s garage တီးဝိုင်းများသို့ ရည်ညွန်းသည်။ ပြန်လည်ရှင်သန်လာသောတီးဝိုင်းများမှာ သူတို့ကို တုပြိုင်စေသည်။
အစောပိုင်းအသုံးပြုသော ဝေါဟာရသည် 60 garage rock တီးဝိုင်း၏ ၁၉၇၃ Nuggets LP သီချင်းကို ဖော်ပြရန် Lenny Kaye ၏ track-by-track ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ classic garage punk the Shadows of Knigt ဟုဆိုသကဲ့သို့ ထိုခေတ်က garage တီးဝိုင်းများကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ မကြာခဏ နောက်ပိုင်းကာလမှ တီးဝိုင်းများကို ရည်ညွန်းထားသည်။ များသောအားဖြင့် ၁၉၇၀နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် garage punkသည် ၉၀ နောက်ပိုင်း ၂၁ ရာစု အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ Allmusic အဆိုအရ အမေရိကမှ ၉၀ punk ရှင်သန်ခြင်း mainstream ကို ရိုက်ခတ်စေခဲ့သည်။ the punk-pop wing မတိုင်မီ ကွဲပြားသော punk များသည် indie-rock underground ထဲတွင် ပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် garage punk သည် punk pop၏ melodic ကဲ့သို့ မနီးစပ်ပေ။ garage punk သည် Detroit မှ protopunk တီးဝိုင်း၏ The Stooges နှင့် MC5တို့ရေးဆွဲထားသည်။
အဓိကလွှမ်းမိုးသည့်ပုံစံမှာ ကွဲပြားသော sonic background မှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အများအားဖြင့် ယိုယွင်းသော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော် တကယ် rocker များ၏နေပုံထိုင်ပုံနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ တီးဝိုင်းများမှာ Motorhead, New York Dollနှင့် မှတ်တမ်း The Damned ၏ Damned Damned Damned နှင့် The Stooges ၏ Raw Power တို့ဖြစ်ပြီး ပုံစံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အရေးပါသော အလျင်ကျသော ဥပမာများမှာ ၁၉၇၀အစောပိုင်း Detroit မှ Death တီးဝိုင်းနှင့် Boston တီးဝိုင်း The Modern Lovers တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ garage တီးဝိုင်းများရှိနေစဉ်တွင် နောက်ဆုံးကျသော လွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းUK punk တီးဝိုင်းများမှာ The Clash ဖြစ်ပြီး သူတို့၏ပုံစံကို garageတီးဝိုင်းဟု ဖော်ပြသည်။ The Clash ၏ထူးခြားသော သီချင်းမှာ ပထမဆုံး album The Clash မှ Garageland ဖြစ်ပြီး အခိုင်အမာဆိုထားသည်မှာ "ကျွန်တော်တို့ဟာ garageတီးဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်၊ garage land မှ ဆင်းသက်လာပါတယ်" ဟုဆိုသည်။ punkနှင့် garage rock တို့စတင်နေစဉ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၁၉၆၀ soul music, beat music, surf music, power pop, hardcore punkနှင့် psychedelia မှ အစိတ်အပိုင်းများပေါင်းစပ်ထားသည်။ များသော garage punk ဂီတသမားများမှ လူဖြူများ၊ working class၊ ဆင်ခြေဖုံးတွင် နေထိုင်သော ဆယ်ကျော်သက်များပါဝင်သည်။ ပထမဆုံး garage punk တီးဝိုင်းမှ အချို့မှာ ၈၀နောက်ပိုင်းနှင့် ၉၀အစောပိုင်းမှဖြစ်ပြီး Sub Pop labelနှင့် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။ New Bomb Turks, The Oblivian, The Gories, Subsonics, The Mummies, The Dirtbombsနှင့် The Humpers စသောတီးဝိုင်းများသည် ၁၉၉၀နှင့် ၂၀၀၀ ကိုဖြတ်သန်း၍ ထိုပုံစံအတွက် ပရိတ်သတ်များတည်ရှိစေရန် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
↑ B. Bryan. Please Explain: What is Garage Punk? MTV Iggy. Feb. 4, 2013. http://www.mtviggy.com/articles/please-explain-garage-punk/
↑ Garage Punk Defined. Boston com. http://www.boston.com/community/forums/arts-and-entertainment/music/general/garage-punk-defined/10/7715960
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Garage_punk&oldid=406369" မှ ရယူရန်